LUK 4 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (LUK 4)
Mgbe ahụ Jisọs onye jupụtara nꞌike Mmụọ nsọ si nꞌosimiri Jọdan obe a nọ mee ya baptizim pụọ. Mmụọ Nsọ duuru ya baa nꞌime ọzara.
Ebe ahụ ka ọ nọ iri ụbọchị anọ ka ekwensu nwaa ya ọnwụnwa. Iri ụbọchị anọ ndị a nile o righị nri ọ bụla. Nꞌikpeazụ, agụụ gụrụ ya.
Mgbe ahụ ekwensu bịara gwa ya sị, “Ọ̀ bụrụ na ị bụ Ọkpara Chineke, gwa nkume ndị a okwu ka ha ghọọrọ gị nri.”
Ma Jisọs zara ya sị, “E deela ya nꞌakwụkwọ nsọ sị, ‘Ọ̀ bụghị nanị site nꞌiri nri ka mmadụ ga-eji dị ndụ.’ ”
Nꞌotu mgbe ahụ ekwensu duuru ya gaa nꞌebe dị elu, ebe ọ nọ mee ka Jisọs hụ alaeze nile dị nꞌụwa nꞌotu ntabi anya.
Ọ gwara Jisọs sị, “Alaeze ndị a nile bụ nke m, ma ejikeere m inye gị alaeze ọma ndị a nile ya na akụ na ụba nile dị nꞌime ha, ma ọ bụrụ na ị ga-akpọ isi ala nye m.”
Ma Jisọs zara sị, “E deela ya nꞌakwụkwọ nsọ sị, ‘Ọ bụ nanị Chineke ka anyị ga-akpọ isi ala nye, ọ bụkwa nanị ya ka anyị ga-efe.’ ”
Mgbe ahụ ekwensu duuru Jisọs gaa Jerusalem, mee ka o guzo nꞌebe kachasị elu nke elu ụlọ nsọ ukwu ahụ. Ọ gwara Jisọs sị, “Ọ bụrụ nꞌezie na ị bụ Ọkpara Chineke, si nꞌebe a tụda onwe gị nꞌala.
Nꞌihi na e dere ya nꞌakwụkwọ nsọ sị, ‘Chineke ga-ezite ndị mmụọ ozi ya ka ha chebe gị.
Ha ga-aghọtakwa gị nꞌaka ha ka ị ghara ịdaru ala merụọ ahụ.’ ”
Jisọs zara sị ya, “Akwụkwọ nsọ kwuru sị, ‘I kwesịghị ịnwa Onyenwe gị Chineke gị ọnwụnwa nzuzu.’ ”
Mgbe ike gwụrụ ekwensu ịnwa Jisọs ọnwụnwa, ọ hapụrụ ya laa tutuu ruo mgbe ọ ga-enweta ohere ọzọ.
Mgbe ahụ Jisọs lọghachiri na Galili. Nꞌoge a, o jupụtara nꞌike Mmụọ Nsọ. Akụkọ banyere ya gbasara ruo akụkụ Galili nile.
Ọ banyere nꞌụlọ ekpere ndị Juu na-ezi ndị mmadụ ihe. Mmadụ nile tokwara ya.
Mgbe ahụ Jisọs gara ije rute Nazaret, obodo nke aka ya, ebe ọ nọ too. Nꞌụbọchị izuike, ọ gara nꞌụlọ ekpere dị nꞌebe ahụ, dị ka ọ dị mbụ eme. Nꞌebe ahụ, o guzoro ọtọ ịgụ akwụkwọ nsọ.
Ndị isi ụlọ ekpere ahụ nyere ya akwụkwọ nsọ nke Aịzaya onye amụma dere. Jisọs meghere ya, bido ịgụ ebe Aịzaya dere ihe ndị a,
“Mmụọ nke Onyenwe anyị dị nꞌahụ m, nꞌihi na ọ họpụtala m ikwusa ozi ọma nye ndị ogbenye, Ọ họpụtala m ikwusa na ndị e kere agbụ ga-enwere onwe ha, na ndị kpuru ìsì ga-ahụkwa ụzọ ọzọ, na ndị a na-emegbu ga-esite nꞌaka ndị na-emegbu ha nwere onwe ha,
ikwusa na Chineke kwadoro ugbu a ịgọzi ndị nile ga-abịakwute ya.”
Jisọs mechiri akwụkwọ ahụ nyekwa ya onyeisi ụlọ ekpere ahụ, nọdụ ala. Ndị mmadụ nile nọ nꞌụlọ ekpere ahụ legidere ya nnọọ anya.
Mgbe ahụ Jisọs bidoro ịgwa ha okwu sị, “Taa ka ihe ndị a e dere nꞌakwụkwọ nsọ, nke m gụpụtara, mezuru.”
Ndị ahụ nile bịara nꞌụlọ ekpere ahụ kwuru okwu ọma banyere ya. O juru ha anya na okwu ọma dị otu a si ya nꞌọnụ pụta. Ha sịrị, “Onye a ò bụghị nwa Josef?”
Ma Jisọs gwara ha sị, “Amaara m na unu ga-atụrụ m ilu a nke sịrị, ‘Dibịa gwọọnụ onwe gị. Gosinụ anyị ihe ị bụ. Gosinụ anyị nꞌobodo nke aka gị, ihe ahụ nile anyị nụrụ na ị na-eme na Kapanọm.’
Ma ka m gwa unu eziokwu, o nweghị onye amụma ọ bụla a na-anara nke ọma nꞌobodo nke aka ya. Chetakwanụ ihe mere nꞌoge Ịlaịja onye amụma. E nwere ọtụtụ ụmụ nwanyị di ha nwụrụ, ndị e kwesịrị inyere aka nꞌoge ụnwụ ahụ, mgbe mmiri na-ezoghị nꞌala Izirel afọ atọ na mkpirisi.
Ma Chineke ezigaghị Ịlaịja inyere onye ọ bụla nꞌime ha aka. Kama Chineke zigara Ịlaịja ka ọ gaa nꞌala Saidọn nyere otu nwanyị onye mba ọzọ di ya nwụrụ anwụ aka.
Chetakwanụ ihe mere nꞌoge Ịlaisha onye amụma. Nꞌoge ahụ, e nwere ọtụtụ ndị ekpenta nꞌala Izirel, ma o nweghi onye a gwọrọ nꞌetiti hạ kariakwa Neeman onye Siria.”
Mgbe ndị mmadụ nụrụ okwu ndị a, iwe were ha nke ukwuu.
Ha nile biliri ọtọ otu mgbe ahụ, jide Jisọs, dọkpụrụ ya pụọ nꞌobodo, gaa nꞌelu ugwu nke e wukwasịrị obodo ahụ, ka ha site nꞌebe ahụ tụpụ ya.
Ma Jisọs sitere nꞌetiti igwe mmadụ ahụ pụọ, hapụ ha nꞌebe ahụ.
O sitere nꞌebe ahụ gaa Kapanọm, obodo dịkwa na Galili. Nꞌụbọchị izuike ndị Juu, ọ banyekwara nꞌụlọ ekpere ha bido izi ndị mmadụ ihe.
Otu ụbọchị mgbe ọ nọ na-ezi ihe nꞌụlọ ekpere ndị Juu, otu nwoke nke mmụọ ọjọọ bi nꞌime ya bịara nso ebe ọ nọ bido na-eti mkpu nꞌoke olu na-asị,
“Chei! Gịnị ka anyị na gị nwekọrọ, Jisọs onye Nazaret? Ị bịara nꞌebe a ka ị laa anyị nꞌịyi? Amaara m onye ị bụ. Ị bụ Ọkpara Chineke dị nsọ.”
Ma Jisọs baara mmụọ ọjọọ ahụ mba sị ya, “Mechie ọnụ gị si nꞌime ya pụta!” Mmụọ ọjọọ ahụ tụrụ nwoke a nꞌala nꞌihu ndị nọ nꞌebe ahụ, site nꞌime nwoke ahụ pụta, ma o merụghị ya ahụ.
Nke a juru mmadụ nile anya mee ka ha sịrịta onwe ha, “Gịnị dị nꞌokwu ọnụ nwoke a, lee na o ji ike na-enye mmụọ ọjọọ ndị a iwu, ha na-apụkwa!”
Akụkọ ọrụ a Jisọs rụrụ gbasara jeruo obodo nile dị ebe ahụ gburugburu.
Mgbe Jisọs si nꞌụlọ ekpere ahụ pụta, ọ gara nꞌụlọ Saimọn. Nꞌebe ahụ ọ chọpụtara na nne nwụnye Saimọn nwere ahụ ọkụ.
Jisọs gara guzo nꞌakụkụ ihe ndina nwanyị ahụ baara ahụ ọkụ ahụ mba. Ahụ ọkụ ahụ hapụrụ nwanyị ahụ. O biliri kwadooro ha ihe oriri.
Nꞌụbọchị ahụ kwa, nꞌoge anyasị, ndị nile nwere enyi nke ahụ na-esighị ike, ndị na-arịa ụdị ọrịa dị iche iche, buteere ha Jisọs ka ọ gwọọ ha. O bikwasịrị ha aka gwọọ ha.
Mmụọ ọjọọ dị iche iche si nꞌime ọtụtụ mmadụ pụta na-eti mkpu na-asị, “Ị bụ Ọkpara Chineke!” Ma Jisọs baara ha mba, kwụsị ha ikwu okwu, nꞌihi na ha maara na ọ bụ Onye nzọpụta ahụ.
Nꞌisi ụtụtụ echi ya, Jisọs si nꞌụlọ Saimọn pụọ gaa ebe ọ ga-anọrọ onwe ya. Mgbe chi bọrọ ndị mmadụ bidoro ịchọgharị ya. Mgbe ha hụrụ ya, ha rịọrọ ya ka ọ ghara ịhapụ ha kama ka o soro ha nọdụ na Kapanọm.
Ma Jisọs zara ha sị, “Ọ dị mkpa na m ga-aga gwa ndị nọ nꞌobodo ọzọ akụkọ banyere alaeze Chineke nꞌihi na ọ bụ ime nke a ka m ji bịa.”
Site nꞌebe ahụ, o bidoro na-agagharị ebe nile na-ekwusa okwu Chineke nꞌụlọ nzukọ nile dị na Galili.
LUK 1 / LUK 1
LUK 2 / LUK 2
LUK 3 / LUK 3
LUK 4 / LUK 4
LUK 5 / LUK 5
LUK 6 / LUK 6
LUK 7 / LUK 7
LUK 8 / LUK 8
LUK 9 / LUK 9
LUK 10 / LUK 10
LUK 11 / LUK 11
LUK 12 / LUK 12
LUK 13 / LUK 13
LUK 14 / LUK 14
LUK 15 / LUK 15
LUK 16 / LUK 16
LUK 17 / LUK 17
LUK 18 / LUK 18
LUK 19 / LUK 19
LUK 20 / LUK 20
LUK 21 / LUK 21
LUK 22 / LUK 22
LUK 23 / LUK 23
LUK 24 / LUK 24